Ressi Medri (Eritrea) , 16 Mar 2014 (Alldhooftinle.com)
Magacyadii Inta Nin Ee Ay Ilaa Iyo Hadda Qaadsiisay Cudurka Aydhiska Ayey Ku Dhawaaqday. Laba Kun Oo Nin Bey Rabtaa Iney Cudurkaa Qaadsiiso
Gabadh 19 jir ah oo dhigata Jaamacada Kabarak University ee ku taala magaalada Nakuru ee dalka Kenya ayaa qiratay inay 324 nin qaadsiisay cudurka aydhiska. Gabadhan ayaa sheegtay in aanay ilaawi doonin 22 September 2013, markaas oo wiil jaamacada la dhiganayey qaadsiiyey cudurka aydhiska.
Gabadhan oo magaceeda qarisay laakiin sawirkeeda soo bandhigtay ayaa ku dhaaratay inay wadeyso howshaa ay go'aansatay oo ah inay laba kun oo nin qaadsiiso cudurka aydhiska.
"Waxaan ahay 19 jir qurux iyo dhererba waan u dhashay waana ta ii fududeysay inaan aarsado oo maalintiiba afar nin qaadsiiyo cudurka aydhiska, nin ayaa ku ciyaaray mustaqbalkaygii iyo noloshaydii, aniguna waxaan go'aansaday inaan aarsado," ayay tiri gabadhaas oo murugo ka muuqatey.
Waxaase yaab leh markii gabadhaas cudurka fidinaysaa ay la soo baxday liis ay ugu qoran yihiin nimanka ay qaadsiisay cudurka. Waxay sheegtay in 156 ka mid ah ay yihiin ardayda la dhigata jaamacada, inta kalena waxay isugu jiraan niman xaasas leh, macalimiinta jaamacadda, looyaro, ganacsato iyo siyaasiyiin.
Gabadhan ayaa hadalkeeda ku soo gebagebaysay "Ina-ragoow waxaad ku ciyaarteen noloshaydii. Sun ayaad i cabsiiseen laakiin waan dhiman waayey, markaas ayaan go'aansaday inaan aarsado. Waa ballan aan qaaday inaan laba-kun oo nin qaadsiiyo cudurka aydhiska, ee bal aan aragno cidda guuleeysata."
Ressi Medri (Eritrea) waxa ku yaal masaajidkii ay dhisteen sanad-miilaadigii 615 Asxaabtii ka soo hijrootey Makka ee la kulantay Boqor Negaashi.